Maalinta: Meey 10, 2019
Loogu talogalay Tartanka Kubbadda Cagta Adduunka ee loo yaqaan '2020 World Mountain Bike, Madaxweyne Ekrem Yüce wuxuu la kulmay Madaxweynaha Xiriirka Nezih Küçükbakırc the iyo wafdiga oo wuxuu yiri, "Anaga oo ah magaalada, waxaan muhiimad gaar ah siineynaa baaskiil wadista iyo baaskiil wadida. baaskiil [More ...]
Magaca xarigga tareenka ayaa isbeddelay Eskisehir
Ka dib markii la beddelo joojinta Espark istaagga Eskişehir tram istaaga ee Meydan Ulus Meydanı “(State Square), magaca tareenka taraafikada ayaa loo beddelay“ Degmada Odunpazarı le with the last planning. Eskişehir tram wuxuu joojiyaa isbedelka magaca. [More ...]
Shidaal Ofisi, Turkey ee brand keenta laba iskaashiga yaptı.tav iyo tav Passport Card heysata heli doontaa dhimis ku saabsan dhammaan saldhigyada shidaalka shidaalka Ofisi. Turkey saliidaha macdanta iyo shidaalka taasoo keentay batroolka iyo kiimikada ee [More ...]
Wasiirka Turhan: "Waxaan kala qaybinnay Shabakada Waddada Xaafadaha 26 Bin 642 Kilometer '
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay adeegga wanaagga iyo xaqqa, wuxuuna yiri, IM Yaanan ku luminin wax kasta oo howlaheenna ah, aan si sax ah u qabanno, aan ka fogaano sharciga oo aan ka hortagno adeegga in la qabto. Sharcigayaga ganacsiga [More ...]
Gobollada Afyonkarahisar, Kutahya iyo Usak ee u adeegaya Maddaarka Gobolka Zafer si kor loogu qaado waxqabadka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Kutahya ayaa marti galiyay kulan. Rector of Kütahya ee cilmiga caafimaadka [More ...]
Go'aanka ah in si deg deg ah loola wareego baaxadda gudaha Yerköy-Sivas Stage ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha ee Sare ee Ankara-Sivas oo ku dhexjirta baaxadda Qeybta Isgoysyada Magaalada Sivas (Km: 450 + 412-461 + 058) ayaa lagu daabacay Jariidada Gazette ee taariikhi ah 10.05.2019. Heerka Yerköy-Sivas ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas Magaalada Sivas [More ...]
Haydarpaşa oo ka hooseysa gawaarida taariikhda qashinka
Qodista waxaa lagu bilaabay raadadkii la helay intii lagu jiray dhismaha khadka tareenka ee Haydarpaşa, Kadıköy. 4 qarnigii 19aad ilaa xilligii jamhuuriga. Magaalada waxay ku fidsan tahay Qeybta Fasaxa Qeybta, mitirka 4 gadaal. [More ...]
Dowlada hoose ee Manisa iyo dawlada hoose ee Salihli, wasaarada arimaha gudaha in ay soo jiidato mudnaanta taraafikada dadka lugeynaya ee gobolka 81 ayaa bilaabay 'lugeeye Kowaad' gudahood marka loo eego baaxadda mashruucan ayaa laga hirgaliyay codsigii ugu horreeyay ee degmada Salihli. Manisa weyn [More ...]
Ka shaqee safarada cusub ee tareenka ee Eskisehir
Shaqo rakibida Asphalt waxay kusii socotaa wadooyinka dhinaceeda iyo inta udhaxeysa xirmooyinka tareenka cusub, oo ay soo idlaatay degmada Eskişehir Metropolitan Municipal oo shaqooyinkooda kaabayaasha dhaqaalaha la dhameystiray. Baaxadda xariiqda fidinta tareenka, Magaalada Isbitaalka Magaalada, Yaşar [More ...]
RayHaber 10.05.2019 Warbixinta Shirka
Adeega Kirada Gawaarida waa la gadan doonaa
Xilliga gaadiidka mudnaanta leh iyo gaadiidka todobaadka taraafigga ayaa lagu qabtay Istanbul
Iyada oo laga duulayo ku dhawaaqida Wasaaradda Gudaha ee sanadka 2019 iyada oo hal-ku-dhigga loo dhigay Hayat mudnaanta nolosha, Ahmiyada ulaha lugaynta İstanbul, Agaasinka Amniga ee Istanbul ayaa qabanqaabiyay munaasabad. Guddoomiyaha Magaalada Istanbul iyo Ku Xigeenka Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Cali ayaa ka qeybgalay munaasabadda. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu kulan muhiim ah ku yeeshay Ankara oo ku saabsan Warshadaha Difaaca oo muhiimad weyn u leh mustaqbalka Kayseri. Madaxweyne Büyükkılıç, Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar iyo [More ...]